Kenya: qulqul hor leh oo ay qaxooti ku soo qulqulaan xerada ayaa sii xumeynaysa xaaladda qaxootiga ku sugan Dhadhaab - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa aad uga walaacsan saameynta caafimaad ee ka dhalan karta hadalkii dhowaan maamulka Kenya ay soo saareen ee kumanaan qaxooti Soomaali ah oo ku sugan Kenya ku cadaadinayey in ay ka tagaan degaannada magaalooyinka ah oo ay aadaan xerooyinka fog ee horeyba ay dadku u buux-dhaafiyeen. Hay’adda ayaa sheegeysa in qulqul kasta oo suuragal ay tahay in qaxooti cusub ay ku soo qulqulaan xerada uu culeys kale saarayo xaaladda aan degganeyn ee hadda jirta.
Xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab, oo ku yaalla waqooyiga Kenya, ayaa xilli-roobaadka waxaa kordha halista in xannuuno iyo cudurro safmar ah oo ka dhex dillaacaan dadka haatanba nugul.
“Gargaarka halkaan oo Dhadhaab ah lagu bixiyo haddaba waa mid gebi ahaanba culeysku ka tan badan yahay mana aha mid daboolaya baahiyaha jira,” ayaa ay tiri Dr. Elena Velilla, oo ah Madaxa Ergada MSF ee Kenya. “Intaa waxaa sii dheer, nabadgelyo-xumada ka jirta xerooyinka daraaddeed, ayaa MSF aaney u suurogaleynin in ay kor u qaaddo hawsheeda ama ay wax ka qabato xaalad degdeg ah oo cusub haddii ay qaxooti badan oo cusub ay ku soo qulqulaan xerooyinka.”
Bishii la soo dhaafey, ayaa tirada carruurta lagu qaabiley csubitaalka MSF iyaga oo qaba nafaqo-xumo aad u ba’an ay laba-laab noqotey waxaana cusbitaalka la dhigey ku dhowaad 300 caruur ah. Carruurtan badidooda waxaa sidoo kale nafaqo-xumada u weheliya shuban-biyood ba’an ama caabuqyada ba’an ee neef-mareenka oo muujinaya xaaladaha nololeed ee liita ee ka jira xerada.
“Tan iyo bilowdii Disembar iyo markii ay da’een roobab culus oo sababey fatahaado/daadad, ayaa ay aad u sii xumaatey xaaladda hoyga iyo fayadhowrka ee xerooyinka oo horeyba u ahayd mid aan degganeyn” ayaa ay hadalkeeda raacisey Velilla. “Arrintan ayaa saameyn ba’an ku yeelatey caafimaadka dadka.”.
MSF oo leh cusbitaal 200 sariirood qaada oo dadka xanuunsan looga soo gudbiyo dhowr xero oo ku yaalla Dhadhaab, waxaa ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee bixiya adeegyada caafimaadka, laakiin waxaa ay la kacaa-kufeysey wax ka qabashada baahiyaha caafimaad iyo kuwa bani’aadamnimo ee mugga weyn ee siina kordhaya.
Tan iyo markii xerooyinka la sameeyey 20 sano ka hor, ayaa xaalado degdeg ay si joogto ah uga dillaacayeen Dhadhaab, iyada oo fatahaado/daadad, dhibaatooyin nafaqo iyo cudurro dillaaca ay joogta uga dhici jireen. Sida ay qabto UNHCR, kow iyo toban jeer ayaa cudurro dillaacay la soo sheegey sanadka 2012ka. Maanta, daacuun iyo cagaarshowga hepatitis E ayaa hadba meel laga soo sheegaa guud ahaan xerooyinka.
Iyada oo xaaladuhu ay ka sii darayaan, ayaa sidaa daraaddeed ay MSF ka baqeysaa raadka uu go’aanka dowladda Kenya uu ku reebayo xaaladda caafimaad iyo tan bani’aadamnimo ee qaxootiga ku nool Dhadhaab ee haddaba aadka u xun.
Hawlaha MSF ee Dhadhaab
MSF waxaa ay cusbitaal ku leedahay Dhagaxley, oo ah mid ka mid ah shanta xero qaxooti ee Dhadhaab. Kooxaha MSF waxaa ay celcelis ahaan bil kasta sameeyaan 14,000 la-talinta caafimaad ee bukaan-socodka ah waxaana ay cusbitaalka dhigaan 1,000 bukaan oo ka kala imanaya qaxootiga iyo bulshooyinka martigeliyey ee degaanka. Waxaa hadda barnaamijka nafaqada ku jira in ka badan 300 carruur ay nafaqo-xumo aad u ba’ani hayso ah, kuwaas oo 63 ka mid ahi toddobaadkan la dhigey qaybta daryeelka xaaladaha degdegga ah ee cusbitaalka iyaga oo loo arkey in xaaladdoodu adag tahay.
Muddo ka badan hal sano ka hor, bishii Oktoobar 2011, ayaa laba shaqaalaha gargaarka ee MSF, Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut, laga qafaashey xerada qaxootiga ee Dhadhaab iyaga oo hawl gargaar degdeg ah u haya qaxootiga Soomaaliyeed. Weli waa la haystaa, waxaana MSF, in kasta oo ay sii waddo wax ka qabashada dhibaatooyinka ba’an, ay hakisey in mashruuc aan degdeg ahayn ay ka furto Soomaaliya ilaa laga sii deynayo la-haystayaashaas.
Tags: Kenya, Somalia, South Central Somalia